प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथी आजपनि सुनुवाइ, कहिलेसम्म फैशलाको पर्खाइ ? – Mission Khabar
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथी आजपनि सुनुवाइ, कहिलेसम्म फैशलाको पर्खाइ ?
मिसन खबर २९ पुष २०७७, बुधबार ०८:३४
सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय सरोकारको यो रिटमाथीको सुनुवाइ र फैशलमा ढिलाई भैरहेको छ । बहशमा प्रधानन्यायधीसको हस्तक्षपकारी भूमिका देखिदा, देशभर फैशला कहिले र कस्तो आउँला भन्ने चासोसँगै प्रतिक्षा छ । वहस लम्बिने तथा सुनुवाईले निरन्तरता नपाउँदा अदालत समेत संसद विघटनको मुद्धामा गम्भिर नदेखिएको आवज समेत उठ्न थालेको छ ।